सु’त्नुअघि जलाउनुहो’स् एउटा ते’जपत्ता, ५ मिनेटमै दे’ख्नुहुनेछ चत्कारी फाइ’दा – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/सु’त्नुअघि जलाउनुहो’स् एउटा ते’जपत्ता, ५ मिनेटमै दे’ख्नुहुनेछ चत्कारी फाइ’दा
ते’जपत्तालाई विशेष गरि परिकारलाई स्वा’दिष्ट बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तेजपत्ता चिया देखि मासुका परिकार सम्ममा राख्न सकिन्छ । ते’जपत्ताबाट आउने वासनाले परिकारलाई मीठो बनाइदिन्छ । तेजपत्तालाई खानेकुरामा मात्र नभएर अन्य तरिकाले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तेजपत्तालाई उमालेर त्यसको पानी पिउनाले विभिन्न रो’गको औषधि समेत हुन्छ । तेजपत्ता प्राचिन समयबाट नै विभिन्न तरिकाले प्रयोग हुँदै आएको छ । प्राचिन समयमा तेजपत्तालाई खाने मात्र होइन, घरमा बालेर पनि राख्ने गरिन्थ्यो ।
एउटा कचौरा या कुनै भाँडोमा राखेर तेजपत्तालाई जलाउँदा त्यसले बत्तिको काम गर्नुका साथै घरमा मीठो वासना पनि फैलिन्छ । अहिलेको समयमा बत्तिको लागि तेजपत्ता बाल्नु पर्ने अवस्था नरहेकोले तेजपत्तालाई एउटा कचौरामा राखेर बाल्ने र त्यो तेजपत्ताको धुँवा मात्र आउने किसिमले राख्न सकिन्छ । धुवाँको एलर्जी हुने स’मस्या छ भने, त्यसलाई कुनै एक ठाउँमा राखेर ढोका बन्द गरिदिन सकिन्छ । यसरि निस्किएको तेजपत्ताको धुवाँले घरभरि वासना फैलिन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ सकारात्मक ऊर्जाको सिर्जना गरिदिन्छ । तेजपत्ताको धुवाँले थकित व्यक्तिको पनि मुड ताजा गरिदिन सक्छ । यसको धुँवाबाट आउने वासनाले स्वा’स्थ्यमा नकारात्म’क असर गर्दैन। तेजपत्ताको धुवाँले गर्दा घरभित्र आएका माउसुली किरा फट्यांग्रा आदि भाग्छन् । त्यस्तै, यसको वासनाले गर्दा घरभित्र सर्प आउंदैन ।
यस्ता छन् तेजपत्ताका लाभदायक गुण: बिशेष गरी गरम मसलाका रुपमा प्रयोग हुने तेजपत्ता एक प्रकारको बासनादार पात हो । बिभिन्न परिकारहरुलाई स्वादिलो र मिठो बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ । त्यति मात्र नभएर तेजपत्ताको पातलाई सौन्दर्य निखारका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोगले त्वचा तथा कपाललाई निकै फाइदा गर्छ ।
१. यदि तपाइँको अनुहारमा काला दागहरु बसेको छ भने त्यसलाई हटाउनको लागि तेजपत्ताको पातलाई पानीमा उमलेर अनुहार धुने गर्नाले अनुहार सफा हुनुका साथै दागहरु हटाउनमा मद्दत गर्छ । २. तेजपत्ताको पानीले अनुहार तथा त्वचालाई घामबाट बचाउनुका साथै त्वचाको रंगलाई समान बनाउन मद्दत गर्छ । ३. त्यसैगरी तेजपत्ताको पानीले कपाल धुने गर्नाले कपाल नरम, मुलायम र चमकदार देखिन्छ । ४. तेजपत्ताको पातलाई लेप बनाएर दहीम मिलाई त्वचामा लगाउनाले त्वचा सफा हुनुका साथै त्वचामा पोषण प्राप्त हुन्छ । ५. तेजपत्ताको पातलाई घाममा सुकाएर धूलो बानाई त्यसले दाँत सफा गर्नाले दाँत मजबुत हुनुका साथै चम्किलो देखिन्छ ।
थप जानकारी ! म’धुमेह रो’ग भनेको के हो ? कसरी जोगिने ? म’धुमेह रो’ग प्राय सबैलाई थाह छ, कसैले यसलाई सुगर भन्छन्, कसैले डायविटिज भन्छन् कसैले चिनीको रो’ग भन्छन् । तर रोग एउटै हो । साधारण भाषामा बुझ्नुपर्दा र’गतमा गुलियोपन अर्थात सुगरको मात्रा बढी भएपछि देखिने रो’गलाई म’धुमेह अर्थात डा’यविटिज भनिन्छ । र’गतमा गुलियोपन बढी हुनुको मुख्य कारण हाम्रो शरीरमा इन्सुलिन भन्ने हार्मोन हुन्छ, कुनै कारणले त्यसको अभाव हुन गयो भने वा इन्सुलिनको अल्छिपना देखियो भने वा इन्सुलिन घटदै गएमा र’गतमा गुलियोपना अर्थात सुगरको मात्रा बढ्छ र मधुमेह रो’ग देखिन्छ । म’धुमेह धेरै प्रकारका हुन्छन् तर हामीले यहाँ टाईप १ अर्थात प्रकार एक र टाइप २ अर्थात प्रकार दुईलाई फोकस गरेका छौँ ।
प्रकार एक म’धुमेहमा इन्सुलिनकै कमी देखिन्छ तर त्यो ज’न्मजात रुपमा अर्थात इन्सुलिन नै बन्दैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई जिन्दगीभर इन्सुलिन लगाउनुपर्छ । अर्थात त्यस्तो व्यक्ति पाँच सात बर्ष देखि नै समस्यामा पर्न सक्छ । र इन्सुलिन लगाउन पर्न सक्छ । प्रकार दुई पहिले इन्सुलिनको मात्रा ठिक भएको तर खानपान जीवनशैलीका कारण विग्रदै गएको म’धुमेह । अहिले बढी मात्रामा देखिने म’धुमेह प्रकार दुई वाला हो ।
इन्सुलिन भनेको के हो ? हाम्रो शरीरमा पे’टको तलपट्टी पेङक्रियाज भन्ने ग्लाण्ड हुन्छ । यसले इन्सुलिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ । यो हर्मोनको काम हामीले खाएको कुनै पनि खानेकुराबाट ग्लुकोजको मात्रा शरीरका विभिन्न कोष(सेल) सम्म पुरयाउने हो । इ’न्सुलिनको कमी भयो वा इन्सुलिनले सो काम गर्न सकेन भने ग्लुकोजको मात्रा र’गतको रगतमै घुमिरहन्छ । जहाँ गएर खर्च हुनुपर्ने ग्लुकोज त्यहाँ नपुगेपछि त्यसको मात्रा बढी हुन्छ । र’गतमा ग्लुकोजको मात्रा धेरै भएपछि यसले शरीरका साना तथा ठूला र’क्तनलिहरुलाई असर पार्छ । यसैबाट जोगाउन हामीले म’धुमेहको उपचार गर्नुपरेको हो ।
म’धुमेहको जोखिम कति वर्ष पछि ? पहिले पहिले भनिन्थ्यो कि म’धुमेह रो’ग बुढयौलीमा देखिने रो’ग हो । अथवा ४० कटेपछि लाग्ने रो’ग हो तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन् । अर्थात बच्चा देखि नै यो रोग लाग्ने गरेको पाइएको छ । म संगै उपचार गराउन आउने कतिपय विरामीको उमेर १२ / १३ बर्षको छ तर प्रकार दुई वाला म’धुमेह देखिएको छ । अहिले प्रकार दुईवाला मधुमेहको समस्या ३० देखि ४५ बर्ष उमेरका व्यक्तिलाई बढी मात्रामा देखिएको छ ।
मधुमेह लाग्दैछ भनेर कसरी थाह पाउने ? लक्षण के के हुन्छन् ? विभिन्न अनुसन्धानले भनेको छ कि ५० प्रतिशत बढीलाई म’धुमेह लक्षण विना नै देखिएको छ । अर्थात कुनै लक्षण विना नै म’धुमेह रो’ग देखा परेको छ । त्यसैले स्वस्थ ठानिएका व्यक्तिले ३० बर्ष उमेर कटेपछि नियमित रुपमा सुगर टेष्ट गराउनु बुद्धिमता हुन्छ । अझ यो रो’ग बंशाणुगत समेत भएकोले बुबा आमा मामा पट्टीका हजुरबा हजुरआमाहरु कसैलाई थियो भने आफूलाई पनि हुन सक्छ भनेर सचेत रहनुपर्छ र त्यसमा पनि टेष्ट गर्नुपर्छ । तर बाँकी पचास प्रतिशतमा लक्षणहरु पनि देखिन्छ ।
ती लक्षणहरु यसप्रकार छन् : धेरै मुख सुक्ने, आलश्य हुने, थकावट हुने, मानिस दुव्लाउदै जाने, चिडचिडाहटपन हुने, यौ’न दुर्वलता हुने, खुट्टामा घाउ हुने, दृष्टिमा समस्या पैदा हुने, कतिपय पे’टको समस्या लिएर आउनुहुन्छ तर परीक्षणका क्रममा सुगर देखिएको हुन्छ । कसैको आँखाको ज्योति गुमेको हुन्छ र परीक्षण गर्दा सुगर देखिएको हुन्छ । कतिपयलाई हृ’दयघात र प्या’रालाईसिस भएपछि बल्ल सु’गर भएको थाह हुन्छ । मधुमेह भएका व्यक्तिलाई इम्युनो कम्प्रमाईज अर्थात रो’गसंग लड्ने क्षमता हुँदैन् । कमजोर हुँदै जान्छ ।